Kiniiniyada kacsiga raga - 50%
Home » Kiniiniyada kacsiga raga
Kiniiniyada kacsiga raga
Waxaa jira waxyaabo badan oo dhir kaabis ah oo suuqa yaalla maanta oo kordhiya waxqabadka galmada iyo qanacsanaanta. Sidee mid loo doortaa mid ka mid ah alaabtaan midkee ku habboon in la tijaabiyo?
Isku dayga inaad kala soocdo sharraxaadyada kala duwan waxay qaadan kartaa waqti iyo jahwareer.
Sidaa darteed, markii aad u kuur gelayso adduunka kaabista galmada dhirta, waxaa muhiim ah in la ogaado macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan daaweynta dhirta.
Markaad raadineyso daawo dhireed, waxaa muhiim ah inaad hesho mid sheegta inay ku hoos dhaceyso qaybta dhirta Se supplements.
Se wuxuu u taagan yahay soosaarid jaango’an, taasoo la micno ah in maaddooyinka si taxaddar leh loo cabbiray loona qaabeeyey si kiniin kasta ama kaabsool kasta ay ugu jiraan qaybta saxda ah ee maaddooyinka.
Daawooyinka dhirta qaarkood ma bixiyaan nidaamkan daruuriga ah; sidaa darteed, qiyaasaha wey kala duwanaan doonaan, xitaa isla dhalada.
Si loo helo yoolalkaas sida balaarinta xubinta taranka, tirada shahwada oo la kordhiyo, ama rabitaanka galmada oo la kordhiyo, isku darka dhirta Se-da ayaa ah furaha. Wax kasta oo kale, natiijooyinka way ku kala duwanaan doonaan iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta qiyaasta la qaato maalin kasta.
Marka qaadashadu kala duwanaato, natiijooyinka isdaba jooga ayaa aad uga dhib badan, haddii aan macquul ahayn, in la gaaro.
Tusaalaha ugu muhiimsan ee dhirta Se supplements waxaa laga heli karaa iyadoo la baarayo kaabisyada sida Vig-Rx.
Waxaa jira waxyaabo badan oo kaabis ah dhirta loo yaqaan ‘Se’, iyo helitaanka midka ku habboon baahidaada waa arrin cilmi baaris ah. Xididada Maca waxay noqotay mid caan ku ah kaabista galmada dhirta.
Marka lagu daro amino acids, isku darku wuxuu keeni doonaa kaliya galmada oo la xoojiyo, laakiin sidoo kale kordhinta wax soo saarka shahwada. Markii aad wax u iibsaneysid kaabisyada galmada ee dhirta, raadi kuwa ay ku jiraan labadaas maaddood ee muhiimka ah iskuna day inaad hesho mid iyaduna bixisa fiitamiino sidoo kale.
Helitaanka maaddooyinka saxda ah ee kaabista ah ee adeegsanaya habka soosaarida jaangooyooyinka ayaa hubin doonta inaad isticmaaleyso wax soo saar tayo leh, taasoo horseedi doonta natiijooyinka ugu fiican.
Markaad baaris ku samaynayso kaabista saxda ah ee la isticmaali karo, waxa ugu horreeya ee la raadsado waa haddii kaabisyada la darsayo ay yihiin dhirta Se supplements.
Hadday maya tahay, markaa waqti ama lacag ha ku lumin iyaga.
Waxaa si fudud loo heli karaa badeecooyin kale oo aad u tiro badan oo la heli karo kuwaas oo la caddeeyey inay shaqeynayaan iyada oo aan luminaynin dadaal ku saabsan kaabayaashaas lagu sameeyay wax ka yar heerarka tayada.
kaniiniyada xoojinta ragga, xoojinta ragga wax soo saarka ugu fiican, dhibaatada kacsiga, dheeri kacsiga, hagaajinta galmada kacsiga, kaabsolka galmada ragga